Gaariga duula PAL-V Liberty: waa riyo dhowaan dhab noqon doonta – Kasmo Newspaper
Gaariga duula PAL-V Liberty: waa riyo dhowaan dhab noqon doonta
Updated - February 25, 2017 3:42 pm GMT
Imisa jeer ayaad, adiga oo sixmad ku jira, ku fakartay in gaarigaagu isu beddelo Helikobtar dusha ka marta safka dheer ee hortaada ka jira, si ad durba u gaarto halkii ad ku socotay?
Waa riyada ay hadda ka dhabaysay Shirkadda Netherlands, PAL-V International B.V. ee fadhigeedu yahay tuulada “Raamsdonksveer” ee Woqooyiga Gobolka Brabant, taas oo saamballadii u horreeyay ku suuq-gaynaysa qiime gaaraya 299,000 oo Euro halkiiba.
Gaariga “PAL-V Liberty” waa kii u horreeyay ee duula taariikhda oo 3 lugood leh, dushana ku wata baalasha wareega (Rotor) oo isku soo laabmi karta, xagga dambana murawaxad (Propeller), kaas oo 5-10 daqiiqo gudahood isu beddeli kara Helikobter ama gaari, hadba kii la doono.
Dhererkiisu waa 4m, balliciisuna waa 2m, waxaa naqshadeeyay farsamo-yaqaanno xeeldheeri durugsan ku leh culunta dhaqaaqa iyo duulista, tijaabooyinkii u horreeyay waxaa la sameeyay 2009kii, waxaana mar kale lagu celiyay 2012kii waana lagu guulaystay.
PAL-V Liberty wuxuu xawaarihiisu gaari karaa 160Km/S, wuxuuna marka shidaalku buuxo socon karaa masaafo dhan 1,300Km; marka uu duulayana wuxuu hinjin karaa culays gaaraya 900Kg, isaga oo sare u kici karaa joog dhan 3,500m.
Marka hawada sare uu qabsado wuxuu ku duuli karaa xawaare dhan 140-180Km/S, wuxuuna, isaga oo uu la socdo duuliyaha oo qur ah gaari karaa masaafo dhan 500Km.
Shirkaddu waxay qorshaynaysaa soo saarista 90 xabbo ilaa dhammaadka 2018ka, kuwaas oo midkiiba isticmaalayo 2 matoor oo nooca Rotex (oo quwaddoodu tahay 100CV, dhulka, midka kalena 200CV circa), wuxuuna kulminayaa raaxada “FlyDrive”.
Gaarigan waxaa loo naqshadeeyay si waafaqsan ruqsadaha iyo xeerarka ka jira dalalka Dunida intooda badan, cid kasta oo iibsanaysana waxaa looga baahanyahay shahaadada Duuliye-nimada.
Baraawe: Qarax Ka Dhacay Garoon Kubadeed oo Dhimasho Sababay
Waa immisa tirada hubka kiimikada ee Dunida ku sugan maanta ?